Su'aalaha La Weydiiyo - Hebei Joyroll Conveyor Makiinado Co., Ltd.
Miyaad dammaanad qaadaysaa inaad si ammaan ah oo ammaan ah u gaarsiiso alaabta?
Haa, waxaan had iyo jeer isticmaalnaa baakadaha dhoofinta oo tayo sare leh. Waxaan sidoo kale u adeegsannaa xirxirida halista khaaska ah alaabooyinka halista ah iyo xaqiijinta rakibayaasha qaboojinta alaabada xasaasiga ah ee heerkulka. Baakadaha takhasuska leh iyo shuruudaha xirxirida aan caadiga ahayn ayaa laga yaabaa inay qaadaan lacag dheeraad ah.
nagu saabsan shabakada iibka nala soo xiriir shaqooyinka